नेपाली भएकोमा म गर्व गर्छु - साप्ताहिक
नेपाली भएकोमा म गर्व गर्छु
नेपाली भएकोमा म गर्व गर्छु, किनभने मेरो देशमा धार्मिक सहिष्णुता छ । (क्रिसमस क्रेज, पुस ११) धार्मिक सद्भाव छ, भाइचारा छ । एउटा धर्म मान्ने हामी नेपालीले अर्को धर्मको चाडपर्वसमेत मनाउन थालेका छौँ । यो सार्‍है राम्रो कुरा हो । हामी विश्वमै नमुना राष्ट्र बनेका छौँ ।
- विनोद गिरी
विश्वमा भैरहेका यस्ता अनौठा घटनाहरू पत्रिकामा छाप्नु र पाठकले पढ्न पाउनु धेरै राम्रो कुरा हो । (सन् २०१४ का अनौठा विश्व घटना, पुस ११) आगामि दिनमा पनि यस्तै सामग्रीहरू पढ्न पाईयोस् ।
- रेजिना राई, इटहरी
वर्षका चर्चित अनुहारहरूमा डाक्टर कुमुद धितालको तस्बिरसमेत प्रकाशन गरिएको भए अझ राम्रो हुने थियो । (वर्षका चर्चित अनुहारहरू, पुस ११)
- थिर बहादुर दाहाल, इटहरी-२, सुनसरी
अभिनेता महेशमान श्रेष्ठको कुरा चित्त बुझेन । २० जोर जुत्ता लगाउँदैमा, ब्रान्डेड र महँगो पहिरन लगाउँदैमा मात्र आत्मविश्वास थपिने होइन । त्यसो भए महँगा पहिरन नलगाउनेहरूमा चाहिँ आत्मविश्वास हुँदैन ? के उनीहरूको कुनै मूल्य नै हुँदैन ? के उनीहरू सफल हुन सक्दैनन् । धन हुनेले राम्रो र महँगो लगाउलान्, नहुनेले के गर्ने ?
साप्ताहिकको गत अंक ज्ञानवर्द्धक एवं सूचनामूलक लाग्यो ।
वर्षका चर्चित अनुहारहरू शीर्षकको लेखमा नेपाली चिकित्सक कुमुद धितालको तस्बिरसमेत प्रकाशन गरिएको भए हुन्थ्यो कि ? (वर्षका चर्चित अनुहारहरू, पुस ११) यो नेपालीहरूका लागि खुसीको कुरा हो ।
- इन्दिरा महर्जन
विश्वका घटनाहरूसँगै नेपालका घटनाहरूलाई पनि स्थान दिनुपथ्र्यो । (बिर्सन लायक दुर्घटना, पुस ११) हामीले हाम्रै देशमा भएका घटनाहरू राम्रोसँग बुझ्न, केलाउन जरुरी छ ।
- मिलन गुरुङ
बेला बेलामा हेयरस्टाइल चेन्ज गर्छु
सप्ताहिकको फेसबुक पेजमा राशिफल पनि राख्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ? मंसिर १९, २०७१